सलमानलाई कसले दिए मार्ने धम्की ? – Online Marg
सलमानलाई कसले दिए मार्ने धम्की ?
Posted on Wednesday, September 25th, 2019 3:48 PM Wednesday, September 25th, 2019 3:48 PM by online marg
बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई मार्ने धम्की आएको छ ।
धम्कीको खबर फेसबुकमार्फत भाइरल भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पञ्जाब विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संगठन ‘सोपू’ भित्रको एक समूहको फेसबुक पेजमा गैरी शूटर नामक युवकले सलमान खानको चित्रमा रातो क्रस लगाएर मार्ने धम्की दिएका छन् ।
यसअघि अपराधी नाइके लरेन्स बिश्नोईले पनि सलमान खानलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । धम्कीका कारण खानलाई पञ्जावको अदालतमा र बाटोमा पनि सुरक्षा दिइएको थियो । आगामी डिसेम्बर २७मा सलमान खानलाई जिल्ला जोधपुर न्यायालयमा पेश हुनुपर्ने समय दिइएको छ ।
Posted in मनोरन्जन मार्गTagged #सलमान खान
लोकदोहोरी गायिका रितु भट्टराई र ध्रुब राना क्षेत्रीको स्वर रहेको 'तम्रै ना�
पारस शाह र सोनिका रोकाया प्रेममा छन् ? (भिडियोसहित)
अहिले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पूर्वयुवराज पारस शाहको एउटा भिडियो भाइरल बने�
दुई सुपरस्टार ऋतिक र टाइगरको ‘वार’ ले अलिहेसम्म कति कमायो ?
ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफको फिल्म ‘वार’ले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कमाई गरिरहेको �
बलिवडमा सोनिकाको ईन्ट्री, विश्वचर्चित कमेडियन कपिल शर्माले किन बोलाए ?
चर्चित भिजे तथा मोडल सोनिका रोकायाले बलिवडमा कमेडी किङ नामले चिनिने कपिल श�
चर्चित नायिका दुर्घटनामा, के छ पछिल्लो अवस्था ?
नायिका केकी अधिकारी दुर्घटनामा परेकी छिन । गीतको लागि छायाँकन गर्न आएको बा �
यस्तो छ ‘छ माया छपक्कै’को ट्रेलर (भिडियो)
चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्�
दिपाले दिइन मायामा भएको संकेत, कसको मायामा छिन ?
निर्देशक तथा कलाकार दिपाश्री निरौला बेला बेलामा सुटिङ सेटबाट तस्बिर सार्व�
मेलिना र धर्मेन्द्रको ‘धोका हुँदैन’ सार्वजनिक
चर्चित गायिका मेलिना राई र धर्मेन्द्र श्रेष्ठको आवाज रहेको धोका हुँदैन बोल
सन्नी लियोनी काठमाण्डौमा के गर्दैछिन ?
नेपाली फिल्म पासवर्डको एउटा गीतमा ठुम्का लगाएकी बलिउड अभिनेत्री सन्नी लिय�
पुरानो टीमले नयाँ सिरियल ल्याउदै, के राखे नाम ?
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने चर्चित लोकप्रिय हाँस्य टेलिसिरियल “भद्रगो